သတိထားရမှာပေါ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သတိထားရမှာပေါ့
Posted by ashinindaka on Feb 14, 2011 in News | 17 comments
ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် (မန္တလေး) မှာနေတုန်းက
Mr. Abel ကနေပြီး
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ အဆောင်မှူး၊ နည်းပြ၊ ကထိကလုပ်ပြီး
နောက်မြစ်ကြီးနားမှာ အင်္ဂလိပ်စာဌာန ပါမောက္ခနဲ့ အငြိမ်းစားယူပြီး
အားနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာသာရေး စာတိုပေစတွေကိုဖတ်ရင်း
မန္တလေးက ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးသင်တန်ကျောင်း၊ သာသနာ့တက္ကသိုလ်နဲ့
အခြား အလျင်းသင့်ရာ စာသင်တိုက်တွေမှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးတယ်။
သူက အင်္ဂလိပ်စာ အရမ်းကိုတော်တယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ ၊ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ဒီအသက်အရွယ်အထိ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆရာတွေထဲမှာတော့
တစ်နေ့ Frustrated ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သူရှင်းပြတယ်။
အပျိုကြီးတွေ၊ လူပျိုကြီးတွေမှာ ဒီ frustration ပိုဖြစ်တတ်တယ်။
အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးဖြစ်တာကိုက သဘာဝကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဖြစ်နေကြတာ။
မသိစိတ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ သဘာဝကတောင်းဆိုတဲ့လိုအင်ကို ဖြည့်ဆည်းခွင့်မရတော့
စိတ်ဆိုးလွယ်ကြောင်း၊ ဒေါသထွက်လွယ်ကြောင်း ပြောပြတယ်။
သဘာဝကို အံတုပြီး ဆန့်ကျင်ပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်နေရတာတဲ့။
မသိစိတ် (unconsciousness) က လိုလားတောင့်တနေတာကို
ဒါ့ကြောင့် အနားနီးတဲ့ ကိုရင်၊ ကျောင်းသား ခဏခဏ အရိုက်ခံနေရတာတဲ့။
ဒီစိတ်ဆိုးလွယ် ဒေါသထွက်လွယ်နေတဲ့ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး၊ ဘုန်းကြီးတွေဟာ
တကယ့်အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး၊ ဘုန်းကြီးအစစ်ဖြစ်နေတာပါတဲ့။
အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး၊ ဘုန်းကြီးတွေကတော့
စာသင်ခန်းထဲမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြဘူးတယ်။
ဒေါသထွက်တာကိုက အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး၊ ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ သဘာဝ လို့ပြောချင်တာတူပါရဲ့။
အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ မထွက်ခြင်းဟာ
စစ်ခြင်း မစစ်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိဘူး။
ဘုန်းကြီးနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူးလို့ စာသင်ခန်းထဲမှာ
တရားနဲ့နေထိုင်သူ၊ တရားနဲ့ မွေ့လျော်သူဖြစ်လို့
သတိတရားနဲ့နေတဲ့သူဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့ စွဲဆောင်မှုကို
မတုန်လှုပ်တော့ကြောင်း ပြန်လည် ရှင်းပြပြီး
မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ ယေဘုယျဆန်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်စကားကိုလည်း ဆက်ပြောပြဖြစ်ခဲ့တယ်။
မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
‘’အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တပည့်တော်တို့ ဘယ်လိုကျင့်ကြံနေထိုင်ရမလဲဘုရား။’’
On one occasion he (Ananda) approached the Buddha and asked Him:
‘’How are we conduct ourselves, Lord, with regard to womankind?’’
‘’As not seeing them, Ananda’’
‘’But if we should see them, Lord, what are we to do?’’
‘’Do not talk to them, Ananda.’’
‘’But if they shuld speak to us, Lord, what are we to do?’’
‘’Be watchful, Ananda’’
မြတ်စွာဘုရား ရှင်အာနန္ဒာကို ပြောပြတဲ့
ဒီတိုစိစိ သြ၀ါဒဟာ အတော့်ကို ခရီးရောက်ပါတယ်။
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ နေနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့
ရွာထဲက အပျိုဂျီးများကတော့ သီးခံနိုင်စွမ်း အလွန်ရှိတာ သတိပြုမိပါတယ်ဘုရား။
မှတ်ချက် ။ အသက်၂၀ကျော်လျှင်အပျိုကြီး၊ ၃၀အထက်ကတော့ အပြီးကျို (သုံးလို့ရမှာ မဟုတ်တော့လို့ recycle လုပ်ခံရခြင်း)။
အမျိုးသားများကတော့ အသက်၄၀အောက်သည် လူပျိုလေး၊ ၄၀ – ၅၀သည် လူပျို၊ ၅၀ – ၇၀ လူပျိုကြီး၊ ၇၀ -၈၀ကျော်ထိ လူပျိုသိုး၊ ၎င်းမှအထက် လူပျိုအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်။ အသက်၁၂၀ကျော်သွားရင်တော့ လူပြီးကျို (မီးသဂြိုလ်စက်နဲ့)
စုံနေတာပဲ၊ တော်သေးတယ် ဘုန်းကြီးပြီးကျိုဆိုတာမပါလို့။
“သတိထားရမှာပေါ့” ဆိုတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ. ဆုံးမစကားက ..
ကိုယ့်ရဲ.ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့စိတ်ကိုလား … ?????
မာတိကာမတွေကိုလား … ?????
ဆိုတာ သေချာရှင်းပေးပါအုံး ဘုရား။
ကွီးကွီး ရဲ့ မာတုဂါမပါ၊ မာတိကာမ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲ .. ဟုတ်သားပဲ … စာလုံးပေါင်း မွှားတွားဒယ် … ဆောဒီးပါဂျာ … !^_^!
အဲ … မိန်းကလေးတော်တော်များများက ဆရာကြီးလုပ်ချင်၊ ရှေ.ရောက်ချင်လွန်းတော့ … အဟဲ … မာတိကာမလို.တောင် ပြောင်းခေါ်ရမလားပဲ။
မှတ်ချက် ။ ကွီးကိုယ်တိုင်လဲ စတိုင်လ်မရောတဲ့ မာတိကာမပါပဲဂျာ … အဲလေ … ရှင့် … ဟီးးဟီးး
တပည့်တော်ထင်တာတော့ များသောအားဖြင့်စိတ်တို ဒေါသကြီးတာ တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီး/ အပျိုကြီးတွေပါဘုရား…
တစ်ယောက်တည်းနေရ တစ်ယောက်တည်းစားရ တစ်ယောက်တည်းသွားရတာများလာတော့ တော်ရုံလူစုလူဝေးကို ညှိနှိုင်းစောင့်စားမနေနိုင်တော့ပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့် အလွယ်တကူစိတ်တိုတတ်ကြတယ်ထင်တာပဲ တပည့်တော်တောင်အသက်ကဖြင့် ၂၅ စွန်းစွန်းပဲရှိသေးတယ် တစ်ယောက်တည်းသွားရတာများတော့ နှစ်ယောက်ဖြစ်လာရင်တောင် စိတ်မရှည်ချင်တော့ဘူး ကိုယ်တိုင်ကလဲလမ်းလျှောက်မြန်တယ်လေ တစ်ယောက်တည်းစားရတာများလာတော့ စကားစမြည်ပြောပီး စားသောက်ရမယ့်ဝိုင်းတွေဆို ကိုယ်ကအရင်ကုန်နှင့်ပီး ငုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်နေပြန်ရော အဲ့တော့စားသောက်ရင်းစကားများနေတဲ့လူတွေကို စိတ်မရှည်တော့ပြန်ဘူး နောက်အကြောင်းအရာတွေလဲ ရှိပါသေးတယ် နောက်လူတွေရွီးရအောင် ချန်ပေးထားပါအုံးမယ် ဘုရား……………..
အပျိုကြီးတွေ အကြောင်းကတော့ သိတဲ့လူ ဆက်ပြောပေါ့ဗျာ… လူပျိုကြီးတွေ တော်တော်များများ တော့ တွေ့ဖူးပါတယ်… အပေါင်းအသင်းခင်ပြီး ဟေးလားဝါးလား လုပ်နေတဲ့ လူပျိုကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့တွေ ထက်တောင် စိတ်ရှည်ပြီး သဘောကောင်းတတ်သေးတယ်၊ တကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေတဲ့ လူပျိုကြီးတွေကတော့ စိတ်တိုတတ်တာ သတိထားမိတယ်…
အပျိုကြီးတွေ တော်တော် များများ ရွန်တတ်တယ်။
အသန့် အပြန့် ကြိုက်တယ်။
တူတွေ တူမ တွေ အပေါ် သဘောကောင်းပါတယ်။
ပူဆာ တတ်ရင် အကုန်ရမယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဆူးသည်အပျိုကြီးဖြစ်ကြောင်း၊ တူ၊တူမများအပေါ်တွင် သဘောကောင်းကြောင်း၊ ပူဆာတတ်ပါက လိုသမျှအကုန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြွားနေပါသည်။
ဆူး အပျိုကြီး ဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ အပျိုကြီးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တူ တူမ မရှိဘူး ချစ်ဖို့.. သဘောကောင်း ပြီး ဘာမှ လည်း မ၀ယ်ပေးရဘူး။
ဆရာ able ကemajor ကပါလား
ဆရာဖြစ်နေလို့ပါ အိန္ဒိယန်းနွယ် ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်အန်ကယ်ဒကာကြီး။ Mr. Abel ဆိုတာသူပါဘဲ။ ဘုန်းကြီးဘွဲ့က ဦးစန္ဒောဘာသတဲ့။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သူက စာသင်ဝါသနာ အတော်ပါတာ။ စာသင်ရရင် ထမင်းမေ့မေ့ ဟင်းမေ့မေ့ပဲ။ ရွာပြန်နေလို့ စာပြန်နောက်ကျတာ sorry။
အရှင်ဘုရား။ ဒေ၀ဒတ် အကြောင်းဆက်မယ်ဆိုပြီး ဘယ်ကို ကြွမြန်းနေပါလဲ ဘုရား။
ရွာကို ခဏပြန်နေလို့ပါ။ ရွာမှာက အင်တာနက်လဲမရှိ၊ အင်တာဖြူလဲ မရှိတော့ ပို့စ်မတင်နိုင်ဘူး။ Sorry!